” ဟိုဟို ဒီဒီ “ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Photography » ” ဟိုဟို ဒီဒီ “	6
” ဟိုဟို ဒီဒီ “
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Feb 9, 2016 in Photography |6comments
” ဟိုဟို ဒီဒီ ”
သင့်အေးရိပ် says: .တောင်တွေကို တိမ်တွေ ကွေ့ဝိုက် ပတ်ရွေ့နေတာမြင်ရင်….
.နောက်ပြီးတော့…. မြစ်ကမ်း ရေစပ်စပ်နဲ့…မြစ်ပြင်ကျယ်ကို မြင်တိုင်း …
.ကျနော် အိပ်မက်တွေ မက်ချင်တယ်….
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: လှသောရူ့ခင်း
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် (B.E) says: ကျနော့အတွက်
သောက်သောက် စားစား ဆိုပြီး တစ်ပုံလောက်
kai says: မှောက်မှောက်မှားမှား. .တပုံလောက်..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 11642
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: သောက်သောက် စားစား
မှောက် မှောက် မှားမှား
အောင် မိုးသူ says: စီစီရီရီ နဲ့ နားနားနေနေ ကို ကြိုက်မိ